मोडेल स्लाइडर Archives - बडिमालिका खबर
को हुन् यस वर्षकी विश्व सुन्दरी ?
पोल्याण्डकी क्यारोलिना बेइलावस्काले ७० औं विश्व सुन्दरी प्रतियोगिताको उपाधि जितेकी छन् । पुएर्तोरिकोमा बिहीबार बिहान सम्पन्न ग्रान्ड फिनालेमा उनले ताज पहिरिइन् । २२ वर्षीया क्यारोलिना व्यवस्थापन विषयमा स्नातकोत्तर अध्ययनरत हुन् । उनको उचाइ १.७९ मिटर छ । मोडल समेत रहेकी उनी पौडी, स्कुवा डाइभिङ, टेनिस र ब्याडमिन्टन खेल्न रुचाउँछिन् । मोटिभेसनल स्पिकर बन्ने उनको लक्ष्य […]
मुम्बई — बलिउड अभिनेता अर्जुन कपुरलाई कोरोना संक्रमण भएको छ। उनीसँगै उनका बहिनी अंशुला कपुर पनि कोरोना संक्रमित भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन्। त्यतिमात्र होइन, अनिल कपुरकी छोरी रिया कपुर र उनका पति करण बुलानी पनि कोरोनाबाट संक्रमित भएका छन्। कोरोना पोजिटिभ भएपछि उनीहरु अहिले क्वारेन्टीनमा रहेको बताइएको छ। अर्जुन कपुर हालसालै क्रिसमसको पार्टीमा सहभागी […]
शैंतिहार नजिकिँदैछ । त्योसँगै सांगीतिक क्षेत्रमा पनि दशैं तिहार लक्षित गीतको वर्चश्व देखिन थालेको छ । यस साता एक दर्जन बढी दशैं–तिहार गीतहरु सार्वजनिक भएका छन् । त्यसबाहेक अन्य केही गीतहरु समेत युट्युबमा सार्वजनिक भए । सार्वजनिक भएकामध्ये केही गीतहरुले मात्र चर्चा पाएका छन् । यहाँ गत शुक्रबारदेखि हिजो बिहीबारसम्म सार्वजनिकमध्ये १० गीत प्रस्तुत गरेका […]
नायिका वर्षा सिवाकोटीको सामाजिक संजाल पछिल्लो केही महिनायता प्रेमको भावनाले भरिन थालेको छ । वर्षा सामाजिक संजालमा प्रेमका भावनाहरु पोख्न तल्लिन छिन् । चलचित्र ‘ए साथी सुन’को छायांकन सकेपछि वर्षा आफ्नै निजी जीवनमा व्यस्त छिन् । उनै, वर्षाको नाम पछिल्लो समय कलाकार राज कटुवालसँग जोडिएको छ । राज र वर्षा केही महिनायता प्रेममा छन् । […]
भारतीय नायिका गीताञ्जली थापाले एक नेपाली चलचित्रमा अभिनय गर्ने भएकी छिन् । उनले अभिनय गर्न लागेको चलचित्र ‘जार’को छायांकन बुधबारदेखि सिक्किममा हुँदैछ । चलचित्रको छायांकनका लागि नायकद्धय सौगात मल्ल र अनुप विक्रम शाही सिक्किम पुगेका छन् । फेरि टेल पिक्चर्स, होप रिल र एल सेभेन सर्टस्को ब्यानरमा निर्माण हुन लागेको यो चलचित्रलाई सत्य कथामा आधारित […]
नेपाली भिडियोमा अस्ट्रेलियन मोडल म्यानटिन
चर्चित अस्ट्रेलियन मोडेल भिक्टोरिया म्यानटिन नेपाली गीतको म्युजिक भिडियोमा देखिएकी छन् । गायिका सुजाता पाण्डेको शब्द, संगीत र स्वर रहेको गीत ‘सुस्तरी’मा म्यानटिनले मोडलिङ गरेकी हुन् । म्यानटिनले पहिलो पटक नेपाली म्युजिक भिडियोमा मोडलिङ गरेकी हुन् । उनलाई भिडियो अस्ट्रेलियामा बसेर फिल्म मेकिङ्ग अध्ययन गरिरहेका नेपाली अनिल गिरीले उतारका हुन् । अनिलकै निर्देशन रहेको भिडिया […]
ज्याकलिन फर्नान्डिस हाल जुन घरमा बसिरहेकी छिन्, यसको भाडा चर्चाको विषय बनेको छ । यो घर अरु कसैको नभई बलिउडकी चर्चित नायिका प्रियंका चोपडाको हो । वर्क कमिटमेन्टका कारण उनी अक्टोबर सन् २०२० मा प्रियंका चोपडाको एक अपार्टमेन्टमा सिफ्ट भएकी थिइन्, यसका लागि उनले भाडास्वरुपव मोटो रकम तिरिरहेकी छिन् । खबरका अनुसार यो अपार्टमेन्टलाई उनले […]
नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह चलचित्र ‘तिम्रो मेरो साथ’को छायांकनका व्यस्त छन् । चलचित्रको छायांकन सुरु भएसँगै उनले दैनिक तस्वीर सार्वजनिक गरिरहेकी छिन् । यो चलचित्रका लागि उनी उत्साहित रहेको वुझ्न सकिन्छ । लगातार चलचित्र असफल, नायक भूवन केसीसँगको विवाद, प्रेममा ब्रेकअपका कारण पनि उनलाई तनाव भएको थियो । तर, लकडाउनपछि चलचित्रको छायांकनमा फर्किन पाउँदा उनी […]
नेपाली चलचित्रका निर्माता तथा कलाकारको स्वभाव पनि अचम्मकै मान्नुपर्छ । चलचित्र हलमा चलिरहेको समयमा दर्शक नआएपनि उनीहरु असफल मान्न तयार हुँदैनन् । बरु, चलचित्र हिट भएको हल्ला फैलाउन केक काट्छन्, मिडियामा बारम्बार अन्तरवार्ता दिन्छन् । यो सूचीमा नायिका केकी अधिकारीदेखि ऋचा शर्मासम्म पर्छन् । असफल भएको चलचित्र ‘कोहलपुर एक्सप्रेस’लाई हिट सावित गर्दै विदेशमा बेच्नका लागि […]
फिल्मका कलाकारले दोहोरीको भिडियो खेल्नु वाध्यता होः करिष्मा ढकाल
लोकदोहोरी गीतका भिडियोमा नाम चलेकी मोडल हुन् करिष्मा ढकाल । उनी भिडियोमा मात्र होइन, स्टेज कार्यक्रममा पनि व्यस्त हुने गर्छिन् । तर, कोरोना भाइरसका कारण स्टेज कार्यक्रम ठप्प भएपछि करिष्माको व्यस्तता केही कम भएको छ । तर, यो बर्ष उनी स्टेज कार्यक्रमको सिलसिलामा चितवन पुगिन् । करिष्माले अनलाइनखबरसँग भनिन्–‘ यो बर्ष यसरी कार्यक्रम होला भन्ने […]
बिर्सने बानीले आँचललाई सहयोगी चाहियो !
नायिका आँचल शर्माले २ महिनाअघि आफ्ना लागि एक सहयोगी हायर गरिन् । आँचलले म्यानेजर राखेको भन्दै मिडियामा समाचार नै बन्यो । कुनै सेलिब्रिटीले निश्चित पारिश्रमिक दिएर व्यक्तिगत सहयोगी नियुक्त गर्नु बलिउड–हलिउडतिर अति सामान्य विषय हो । तर, नेपालमा सबै सेलिब्रिटीले यसरी पर्सनल सेक्रेटरी वा म्यानेजर राख्न सक्दैनन् । त्यसैले कसैले राख्यो भने समाचार बन्छ । […]
नायिका बन्ने बाटोमा परितोशिका
गायिका अन्जु पन्तकी छोरी परितोशिका पन्त मोडलिङ हुँदै चलचित्र यात्रामा लाग्ने तयारीमा छिन् । अन्जु आफै पनि अब छोरीलाई मोडलिङमा ल्याउने बताउँछिन् । परितोशिका आफ्नी आमाको जस्तो स्वर आफ्नो नभएको र आफू त्यो तहमा नपुग्ने भन्दै गायन पेशमा नलाग्ने बताउँछिन् । हालै मात्र उनी अभिनित म्यूजिक भिडियो ‘धेरै माया नदेउ’ सार्वजनिक भएको छ । यो […]
फिल्म ‘डिसेम्बर फल्स’ अभिनेत्रीको रुपमा उपासना सिंह ठकुरीको अभिनय रहने भएको छ । केही साता अगाडि एक कार्यक्रम सहित निर्माण घोषणा भएको फिल्म अभिनेता आर्यन सिग्देलको जोडीको रुपमा उपासना भित्रिएकी हुन् । फिल्म घोषणा कार्यक्रममा निर्माण टीमले हिरोइनको नाम केही दिनमा टुंगो लाग्ने बताएको थियो । अहिले भने हिरोइनको रुपमा उपासनासँग सम्झौता भएको निर्माता रामप्रसाद […]
अभिनेत्री श्वेता खड्काले विवाह गर्ने भएकी छन् । उनले धनगढीका विजयेन्द्र सिंह रावतसँग यही मंसिरमा लगनगाँठो कस्न लागेकी हुन् । श्वेता र रावतको विवाहका बिषयमा छापिएको विवाह कार्ड अहिले सार्वजनिक भएको छ । जसले उनले रावतसँग बिवाह गर्न लागेको समेत पुष्टि गर्दछ । उनले यहि मंसिर २२ अर्थात ७ डिसेम्बरमा बिवाह गर्न लागेकी हुन् । […]
एजेन्सी – अभिनेत्री काजल अग्रवाल अक्टोबर ३० अर्थात आज आफ्ना प्रेमी गौतम किचलुसँग सातफेरो लिँदैछिन् । उनी यतिबेला विवाहका विभिन्न काममा व्यस्त छिन् । उनले आफ्ना विवाहका विभिन्न कार्यक्रमको तस्बिर सामाजिक सञ्चालमा सेयर गरिरहेकी छिन् । उनले आफ्नो इन्स्टाग्राम अकाउन्टमा आफ्नो विवाहको विषयलार्ई लिएर तस्बिर सेयर गरेकी थिइन् । काजलले विवाहको बारेमा लेखेकी छिन्, ‘मलाई […]
‘मिसेस नेपाल २०२०’को आवेदन खुल्ला भएको छ । बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोजक इप्लानेट प्रालिले प्रतियोगिताका लागि आवेदन खुल्ला भएको जनाएको हो । बिवाहित महिलाहरुको सौन्दर्य निखार्दै उनीहरुको व्यक्तित्व विकाश गर्ने उद्देश्य रहेको ग्रिन आर्ट्स नेपालको संयोजनमा आयोजना हुँदै आएको प्रतियोगितामा यो वर्ष कोभिड १९ को महामारीलाई ध्यानमा राखेर अनलाइन तथा अफलाइन दुबै माध्यमबाट […]
काभ्रेको तीनधारे झरना अहिले चर्चामा छ । सामाजिक संजालमा यसको चर्चा भएपछि यहाँ पुग्ने आन्तरिक पर्यटकको संख्या बढ्न थालेको छ । नेपाली चलचित्रकी नायिका तथा मोडल नम्रता सापकोटा पनि तीनधारे झरना पुगिन् । नम्रताले उपलब्ध गराएको तस्वीरमा उनी खुलेकी छिन् । काठमाण्डौको भीडभाडबाट केही समय राहत पाउनका लागि पनि मानिसहरु यो झरनासम्म पुग्ने गरेका छन् […]